Bianco Ambohibao: notolorana loka ireo mendrika tamin’ny “Iray sy valo” | NewsMada
Bianco Ambohibao: notolorana loka ireo mendrika tamin’ny “Iray sy valo”
Dingana lehibe! Izay raha tsorina ny mahakasika ny fanolorana loka ho an’ireo ankizy sy tanora mendrika tamin’ny famoronana horonantsary fohy entina miady amin’ny kolikoly. “Iray sy valo” ny anarana nentina nampisalorana ny fifaninanana.
Hetsika teo ambany fiahian’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly anentanana sahady ny olona rehetra, indrindra dieny mbola zaza, hiady amin’ity fanetriben’ny firenena ity. Voakasika amin’izao hetsika izao ireo vaomieran’ny ankizy manerana an’i Madagasikara efa tarihina sahady hiady sy hankahala ny kolikoly na ny Réseau d’honnêteté et d’integrité (RHI). Marihina fa efa manerana an’i Madagasikara ny fisian’ity RHI ity ka any an-tsekoly ny sampan’izy ireny tsirairay avy. Amin’ny ankapobeny, miisa 57 ireo sanganasa voaray, raha akapoka, tafiditra sy saika nandray anjara avokoa ireo RHI miisa 50 efa misy manerana ny Nosy. Nahazo ny loka voalohany natolotry ny Bianco sy ny mpanohana ny RHI INSPMad Mahajanga, rehefa nandalo sivana sy fitsarana maharitra tamin’ny alalan’ny pejy facebook-n’ny Bianco. Faharoa manaraka azy kosa ny RHI an’i Mahazegny Fianarantsoa raha nitazona ny laharana fahatelo ny lycée Mixte Zafy Albert. Notontosaina tetsy amin’ny foiben’ny Bianco etsy Ambohibao ny fizarana ny loka ho an’ireo mendrika, omaly zoma 12 jolay 2019.
Tanjona amin’izao hetsika izao ny haharesy lahatra ny olona rehetra, tsy ny ankizy ihany fa hatramin’ny olon-dehibe aza, hiady sy hisoroka ny kolikoly amin’ny endriny rehetra. Nentina nanatontosana izao hetsika izao, nisy ny fiaraha-miasan’ny Bianco amin’ny fari-piadidiam-pampianarana tsirairay (Cisco), ny foibem-pitantanana rezionaly momba ny fampianarana, ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena mba hampiroboroboana ity RHI ity manerana an’i Madagasikara.
Etsy andaniny, sehatra ahazoana mifanabe sy mifananatra ny RHI izay miainga indrindra eny anivon’ny sekoly ka haharesy lahatra ny rehetra hiady amin’ny kolikoly, indrindra ho an’ireo taranaka aty aoriana.